Maindasitiri Akaviri-Akatsigira Tepi |
Maindasitiri Akaviri-Akatsigira Tepi
MEIYUAN Kaviri mativi matishu tepi ipurasitiki mapepa akaputirwa acrylic namira.
Yakasarudzika anti-shear simba uye yekubatanidza simba, uye iri rebound.
inokodzera zvinhu zvakasiyana siyana, zvinosanganisira mapurasitiki mazhinji, dehwe uye zvinhu zveMatare.
Yakakura mhando dzakasiyana dzakasiyana maficha esarudzo, uye inogona kushandiswa kubatanidza akasiyana base zvigadzirwa, ine yakanaka rebound uye warp proof zvivakwa uye inogona kushandiswa pane arched pamusoro.
Yakapetwa mativi PE Yakavharwa silicone kuburitsa bepa
TapeIndustrial maviri-mativi tepi: Iyi nhepfenyuro yeakaviri mativi tepi inowanzo shandiswa mumotokari indasitiri uye imba yekushandisa indasitiri. Inogona kushandiswa kwekubatanidza uye kugadzirisa kwemazita ezita, membrane switch, mafiriji uye evaporator. Nekanaka rebound uye warp proof zvivakwa, yakasimba simba rekubatanidza pamwe nekupisa tembiricha.
√Universal mativi mativi matepi: MEIYUAN akagadzira akasiyana mativi-maviri mativi tepi macode, anosanganisira epasirese maviri-mativi tepi uye maviri-mativi tepi kune akasiyana akakosha maindasitiri, anonyanya kushandiswa kupakata nekudhinda indasitiri, zvipfeko uye dehwe indasitiri, PE / PU furo indasitiri, hofisi inopa indasitiri uye zvichingodaro. Iine yakanaka yekutanga tack uye kurerukirwa kwekukurumidza kubatana, ine yakazara application.
Iyo upamhi uye kureba kwechigadzirwa kunogona kugadzirwa.
Kana iwe uchida chigadzirwa chakasiyana, ndapota taura nesu uye uye masevhisi edu anozopihwa munguva.
Q: Ndezvipi zvinhu zvinofanirwa kupihwa kuti uwane iyo chaiyo kotesheni?
A: Unofanirwa kupa kureba, upamhi, ukobvu uye huwandu hwechigadzirwa. Ndokumbira utitaurire mamiriro ekushandisa kana zvichibvira. Isu tichakupa iwe nemutengo wakanakisa kuburikidza neruzivo iwe rwaunopa.
Mubvunzo: Tinogona kuita diki diki?
A: Hongu, tinogona kugamuchira diki odha, asi hakuzove nemutengo.
A: Isu tinowanzo taura mukati memaawa makumi maviri nemana mushure mekuwana kubvunza kwako kana iwe uchikurumidza kuwana mutengo. Ndokumbira utifonere kana utiudze neemail kuti titore kubvunza kwako sepakutanga.
Mubvunzo: Ko yedu yega logo / chinyorwa chinogona kudhindwa pane iko kurongedza?
A: Ehe, yako yega logo / chitaridzi inogona kudhindwa pane iyo yekuisa pane yako yemvumo mvumo, isu tinotsigira OEM sevhisi zvinoenderana nevatengi vedu 'chinodiwa kwemakore makumi matatu.
Pashure: Yakarukwa uye Mesh Rudzi Rakaumbwa Aluminium Foil Tepi
Zvadaro: Aluminium Fiberglass Cloth Tepi
Hutsinye Adhesive Poly Tarp Tepi
Kaviri Pp Adhesive Tepi
Pressure Inonzwisisa Adhesive Tepi
Yakasimba Adhesive Tepi
Aluminium Foil Girazi Yejira Tepi, Yakapetwa-Yakatsigirwa Yakasimbiswa Aluminium Foil Kutarisana, Intertape Polymer Boka Aluminium Foil Tepi, Tepi, Imwe-yakatsigira Aluminium Foil Kutarisana, Iyo Inopisa Sei Inogona Aluminium Foil Tepi Tora,